ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အဘယ်မျှကို Safe ချိန်းတွေ့ဖြစ်
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: နိုဝင်ဘာ. 22 2020 |4မိဖတ်ပြီးသား
သို့သော်သင်ကဘာလုပ်လို, ချိန်းတွေ့အန္တရာယ်များတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. သူစိမ်းတွေကိုပြောနေတာမလေးတွေအားပေးမည်ဟုသံကိုအကြံဉာဏ်တွေဖြစ်ပေမယ့်တစ်ခုတည်းဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်စေရန်မဟာဗျူဟာတစ်ရပ်အဖြစ်စေခြင်းငှါ,, ကအနည်းဆုံးတစ်သိသာအားနည်းချက်ရှိတယ်. သင်သည်သင်၏အစ်ကိုဝမ်းကွဲလက်ထပ်ထိမ်းမြားချင်တဲ့မဟုတ်လျှင်, တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူဆင်းအခြေချရန်ရှာဖွေမတွေ့ရှိစုစုပေါင်းဧည့်သည်တို့နှင့်အတူမျက်လုံးချင်းအောင်ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်, စကားပြောဆိုမှုမှာသူတို့ကိုစေ့စပ်နှင့်သူတို့တဦးတည်း-on-one တွေ့ဆုံ.
နှစ်ဦးသိသာအန္တရာယ်တွေဒီမှာရှိပါတယ်. ပထမဦးဆုံးအသစ်ရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ဦးကပြီးပြည့်စုံပာယ်ဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်တကယ်တော့နှလုံး-ကိုဖဲ့၏စံချိန်တင်နှင့်အတူအအေးသွေး philanderer ဖြစ်နိုင်. သူတို့ကသင်တို့အပေါ်မှာဦးဆောင်ဘာမျှမစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်, ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်သင်၏စိတ်ခံစားမှုကိုကျော်နင်း. ဒါကြောင့်လုံလောက်တဲ့မကောင်းတဲ့င်နှင့်သင်ပြီးသားကဲ့သို့လူမျိုး၏လုံလောက်ဖြစ်နိုင်ခြေခဲ့တယ်.
ဒုတိယစိုးရိမ်ရေမှတ်ပင်ပိုမိုဆိုးရွားသည်, ကကြီးမြတ်သဘောတူညီချက်အလွန်ရှားပါးတဲ့ပင်လျှင်. သင်ကဘားတန်းကိုခရီးဦးကြိုပြုခြင်းအတွက်သောဆွဲဆောင်မှုလူစိမ်းအမှန်တကယ်ဒေသခံ sanatorium တစ်ဦးထံမှထွက်ပြေးလွတ်မြောက်အကျဉ်းသားဖြစ်နိုင်. အဲဒီအစားသင့်ရဲ့အသက်တာ၏ကြွင်းသောအရာများအတွက်လုံခြုံစိတ်ချခံစားသောသူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာတွေ့၏, သင်စွန့်စားမှာသင့်ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုတင်သွားမယ့်သူတစ်ဦးကောက်နှင့်တရားရုံးအမိန့်နဲ့အသစ်အချက်ပေးတဲ့စနစ်တွေရဲ့စီးရီးကိုထုတ်ခြင်းငှါသင်တို့ကိုလိုအပ်.
ဒီအွန်လိုင်းတူတစ်စုံတစ်ဦးကအစည်းအဝေး၏အခွင့်အလမ်းသည်အလွန်သေးငယ်ပေမဲ့, ထိုသို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုသတိထားရစေရကျိုးနပ်သည်. ဤအခန်းတွင်, ကြှနျုပျတို့သညျဤဒုတိယအုပ်စု၏ရှင်းလင်းသောခုတ်မောင်းဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပြောဆိုနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံအွန်လိုင်းနေဖို့တာပေါ့.
သင် bar မှာတစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုခြင်းသည့်အခါ, ဒါကြောင့်တစ်ဦးကို check-out ဖြစ်သကဲ့သို့ကနဦးခူး-up အဖြစ်တာဘေးကင်းလုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုများဖြစ်. သင်သည်သင်၏ဥစ္စာဘေးမှာစားပွဲနားမှာတစ်ဦးတည်းထိုင်နေသောဆွဲဆောင်မှုတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိမယ်ဆိုရင်, သင်သူတို့ဟာစားပွဲထိုးနှင့်အတူပြုမူပုံကိုကြည့်ဖို့မိနစ်အနည်းငယ်အဘို့ထိုသူတို့စောင့်ရှောက်လုံးကိုမှာအဆက်အသွယ်တစုံတမျိုးလုပ်ရှေ့၌သင်တို့တိုင်အောင်သူတို့ကိုကြည့်ပေးမီ, ကိုယ့်ကိုယ်အားဖြင့်သို့မဟုတ်အနားမှာရှောက်သွားသောလူတို့နှင့်အတူ. သူတို့ရိုင်းစိုင်းရောက်နေတယ်ဆိုရင်, မာနထောင်လွှားခြင်းသို့မဟုတ်ရုံကူးပြောင်းခြင်းကိုလုံးဝမနှစ်မြို့ဖွယ်, သူတို့ဘယ်လောက်တာ looker ကအရေးမပါဘူး, သင်ဆဲအားဖြင့်ညာဘက်အပေါ်ကြည့်ချင်ပါတယ်. သင်ရရှိလာတဲ့သာဆိုရင်သူတို့ကပုံမှန်ပါပဲ, ယဉ်ကျေးသောလူ့သတ္တဝါသင်သည်မျက်လုံးချင်းလုပ်ရန်ကြိုးစားပါဘူး, ငြင်းပယ်ခံရရင်ဆိုင်ဖို့သတ္တိတွေဆွတ်ပြီးသင့်ပြောင်းရွှေ့စေ.
တဖန်သင်တို့ကအပြောင်းအရွေ့လုပ်တစ်ချိန်က, သင်တို့၌အစဉ်စကားပြောနေတာလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံမှန်ထက်လျော့နည်းဖြစ်သည်ကိုသင်တို့အားပြောပြကြောင်းနည်းနည်းအချက်ပြလှိုင်းထွက်စောင့်ကြည့်နေတာပါ. သင်ထိုသို့ပြုပါကကူညီမှသဲလွန်စအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်: လမ်းကိုတစ်စုံတစ်ဦးကဆင်မြန်း, သူတို့စကားပြောလမ်းနှင့်၎င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားနာမတော်မူကားအနည်းငယ်နှင့်သင်ပင်သင်သည်ထိုသူတို့အဘို့အရှာဖွေနေတဲ့သဘောပေါက်မပါဘဲသူတို့အားလုံးကိုသတိထားမိမှာ.
တစ်ဦးက cowboy ဦးထုပ်နှင့်ဥပမာတစ်ခုတက္ကဆက်ပြည်နယ် drawl, တစ်စုံတစ်ဦးထံမှအဘယ်မှာရှိသူတို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှု၌ရပ်သည်အဘယ်ကချက်ချင်းကိုသင်ပြောပြ. Bleached ဆံပင်နှင့် dude '' နဲ့အဆုံးသတ်ဖို့စာကြောင်းများ’ အများကြီးအတူတူသင်ပြောပြ. ဦးနှောက်အာရုံကြောကွောဆှဲ, ရုမ်းမင်းလက်ကိုလူအပေါင်းတို့နှင့်ကုပ်ခြစ်ပိုင်ထိုက်သောသင်တက် sizing သင်ရက်စွဲတစ်ခုလုပ်ဒါမှမဟုတ်ဆင်ခြေဆင်လက်လုပ်သင့်မသင့်နှင့် ပတ်သက်. ဆုံးဖြတ်ချက်ချကိုကူညီလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းတစ်ခုခုပြော.
Face-to-မျက်နှာ, သင် chatting လုပ်နေကြတယ်စဉ်းစားလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုပမာဏအမြောက်အမြားကိုပြောပြကြောင်းမတူညီသောအချက်ပြလှိုင်း၏တစ်တန်ရရှိပါသည်.
အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း, သင်တို့အပေါ်မှာသွားမရခဲ့ဘူးသို့သော်အဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူတို့ရဲ့အီးမေးလ်မှာသူတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်ပေါ်တွင် စား. ရေးသားခဲ့သည်မှာင်.
“သင်သည်အဘယ်အရာကိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး drives တွေကိုအချို့ကိုစိတ်ကူးရှိသည်ဘယ်မှာကို real-ဘဝဆက်ဆံရေးကိုမတူဘဲ, အဘယ်သို့သောသူတို့အမှန်တကယ်တူအောင်, သူတို့ဘယ်လိုနေထိုင်ကြ, စတာတွေ, အွန်လိုင်းကိုသင်၏အဘယ်သူမျှမရှိသည်,” Lisa ကို Hupman ကပြောပါတယ်, WildXangel.com ထူထောင်သောသူဝါရင့် cyberdater, အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်အန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်. အခြား daters သတိပေးကြောင်း website တစ်ခု. “သင်နဲ့ရွေးချယ်စရာမရှိပါဘူးကြောင့်အမှန်တကယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ထက် ပို. ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုပေးကြတယ်။”
တဖန်သင်တို့ကပိုတိကျမှန်ကန်စွာရွေးချယ်စရာမရှိ-သို့မဟုတ်ရှိသည်အကြောင်းရင်း, ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်သာ-အကြောင်းသင့်ပေးယုံကြည်မှုအဆင့်ကိုအကြီးဆုံးအွန်လိုင်းကာကွယ်သောအဓိက tool ကက်ဘ် roams သူကရံဖန်ရံခါ nutcase ကိုအကာအကွယ်တူညီသောအရာဖြစ်တယ်: အမည်မဖော်လို.
အွန်လိုင်းအီးမေးလ်များကိုဖလှယ်သူနှစ်ဦးလူတွေကသူတို့မှရေးနေတာကိုလူများ၏အစစ်အမှန်အထောက်အထားတွေကိုသိရန်အဘို့အလမ်းမရှိ. သင်သည်ထို site ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးတစ်ခု Inbox ထဲတွင်မြေများကိုခံယူအီးမေးလ်.
နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တို့၏စစ်မှန်သောကြကုန်အံ့မ, သင်ယုံကြည်မှုတယောက်ပမာဏကိုတက်တည်ဆောက်ပြီးသွားပြီမီအပြည့်အဝနာမချော်, သင်အပြည့်အဝသင်ထားလိုက်တယ်သူသင်မည်သူကိုမျှစိတ်ကူးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖြင့်ကာကွယ်ထားသည့်အွန်လိုင်းဆက်ဆံရေးဟာစတင်, သင်သည်သူတို့ site ကိုပြင်ပမှာသင်ကိုကိုင်ရနိုင်ပါဘယ်လိုအသက်ရှင်နေထိုင်သို့မဟုတ်ဘယ်နေရာမှာ.
သင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကြတဲ့အခါမှာ, ကြည့်လုပ်နေရဲ့ချိန်းတွေ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုသာ Internet ပေါ်တွင်တည်ရှိကြောင်း. သင့်အွန်လိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်နှင့်အစစ်အမှန်သင်နှင့်ကအတားအဆီးသင်အွန်လိုင်းဆည်းဖို့လုံလောက်ကံမကောင်းပါဘူးရှိစေခြင်းငှါမဆိုဆန့်ကျင် wacko သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်ပါတယ်အကြားပြီးပြည့်စုံအတားအဆီးရှိတယ်.
သင်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်မှာ loony ခရီးဦးကြိုပြုခြင်းငှါ, ကံဆိုးရှိပါက, နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်သင့်ရဲ့အထောက်အထားကိုစောင့်ရှောက်င်အဖြစ်လျှို့ဝှက်ချက်, သူတို့တကယ်အသက်တာတွင်သင်သည်နှောင့်အယှက်နိုင်တဲ့လမ်းမရှိမယ့်.
ဟုတ်ပါတယ်, လွန်းသောသူတို့အဘို့အလုပ်ဖြစ်. သင်အွန်လိုင်းသင်တွေ့ဆုံရန်တစ်စုံတစ်ဦး၏ဇစ်မြစ်ကိုစစ်ဆေးရန်အတွက်လမ်းမရှိမယ့်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်, သင်အီးမေးလ်တစ်စောင်စေလွှတ်တော်မူသောဆရာဝန်ဟားဗတ်ကနေသူသို့မဟုတ်သူမ၏ဒီဂရီလက်မှတ်ထရှိမရှိမရှိစိတ်ကူးရရှိပါသည်, သူတို့ဆိုကြသည်အဖြစ်, သို့မဟုတ်ရိုမေးနီးယားအတွက် website တစ်ခုကနေအမိန့်ချမှတ်. သူတို့ကယ့်ကိုနောက်ဆုံးနှစ်နှစ်များအတွက် Peace Corps အတွက်အလုပ်လုပ်သို့မဟုတ်ပြည်နယ် penitentiary ထိုကာလ၌အပ်ချုပ် mailbags သုံးစွဲခဲ့ကြလျှင်သင်တို့သည်နောက်စိတ်ကူးရရှိပါသည်. ထိုအသင်စိတ်ဝင်စားမယ့်ဒါမှမဟုတ်သင်အလုပ်ကနေအိမ်ပြန်လာရန်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းသင့်အိမ်ရှေ့တံခါးအပြင်ဘက်ပတ်လည်မှာတွဲလွဲဆွဲထားသူတို့ကိုပြောပြတစ်ချိန်ကအသည်းအသန်အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဖော်ပြခဲ့သူတစ်ဦးတည်းကိုသင်ချန်ထားမည်ရှိမရှိမရှိစိတ်ကူးရရှိပါသည်.
သင်အွန်လိုင်းတစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုခြင်းအခါသင်တဆင့်သွားနိုင်စေတဲ့စစ်ဆေးရမည့်စာရင်းရှိခဲ့သည်ဆိုပါကသဘောကောင်းပါလိမ့်မယ်. သူတို့ကဓါးဖော်ပြခဲ့တဲ့ဆိုရင်’ သုံးကြိမ်ထက်ပိုပြီးပထမဦးဆုံးအီးမေးလ်ထဲတွင်, သင်က box ကို tick နိုင်. ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အအကြမ်းမဖက်ပြစ်မှုများမျိုးစုံကိုစာကြောင်းများဝတ်ပြုသောဖော်ပြခဲ့တဲ့ဆိုရင်, နောက်ထပ် box ကို tick ကိုသင်ဦးဆောင်မည်. ထိုသူတို့အထဲကဒဏ်ခတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသော Unabomber နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ခင်မင်ရင်းနှီးအကြောင်းဆွေးနွေးလိုလျှင်.
ဘေးကင်းလုံခြုံအွန်လိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသုံးခုရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတိုင်းလိုက်နာရန်ဖြစ်သည်: တတ်နိုင်သမျှရှည်စွာသင်၏အမည်ဝှက်ကိုစောင့်ရှောက်; တစ်ခုခုမှားခံစားမိပါကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့, ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပေသည်; အဖြစ်မကြာမီသင်သည် fishy တစ်ခုခုအနံ့အဖြစ်လုံးဝမြန်ဆန်သူတို့ကိုထွက်ခုတ်ဖြတ်.